Nisy lesoka hita tao anaty rakitra
Home Products DataNumen Outlook Repair Hita ny lesoka tao amin'ilay rakitra xxxx.pst…
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny lesoka "lesoka hita ao anaty rakitra"
Rehefa manokatra fisie Outlook PST efa simba na simba amin'ny Microsoft Outlook dia hitanao izao hafatra diso izao:
izay 'xxxx.pst' no anaran'ny fisie Outlook PST hisokatra.
Ny rakitra PST dia misy fizarana roa, ny lohan'ny rakitra, ary ity fizarana data manaraka ity. Ny lohan'ny rakitra dia misy ny most fampahalalana manan-danja momba ny fisie iray manontolo, toy ny sonian'ny rakitra, haben'ny rakitra, mifanentana sns.
Rehefa manandrana manokatra rakitra i Microsoft Outlook dia hamaky ny lohateny lohateny voalohany izy io ary hanamarina ny mombamomba azy, ohatra, ny sonian'ny rakitra ary koa ny fampahalalana mifanentana. Raha tsy mahomby ny fanamarinana dia hitatitra ny "Ny rakitra xxxx.pst dia tsy rakitra fampirimana manokana." fahadisoana. Raha tsy izany dia hanohy hamaky ny ampahany amin'ny angon-drakitra sisa tavela izy ity ary raha misy lesoka ao amin'io ampahany io dia hitatitra ilay lesoka voalaza etsy ambony izy io, ary hanome sosokevitra anao hampiasa ilay Fitaovana fanamboarana boaty (Scanpst.exe) manamboatra azy.
Fa ho an'ny most toe-javatra, scanpst tsy afaka manamboatra ny lesoka, ary mila mampiasa ny vokatray ianao DataNumen Outlook Repair hanamboatra ny rakitra PST maloto ary hamaha ny olana.
Mety ho hitanao ihany koa io lesoka io rehefa mampiasa Outlook 2002 ianao na tsimbadika ambany ary mahatratra na mihoatra ny Fetra haben'ny rakitra 2GB. Raha izany no izy, dia izany ihany DataNumen Outlook Repair afaka manampy anao.
Ohatra ny rakitra PST simba izay hiteraka ny lesoka. Outlook_2.pst
Ny rakitra sitrana tamin'i DataNumen Outlook Repair: Outlook_2_fixed.pst
Fomba 8 hisorohana ny kolikoly ataon'ny PST
"Ny rakitra xxxx.pst dia tsy rakitra fampirimana manokana." fahadisoana.
DataNumen Database Recovery 2.7 dia navoaka tamin'ny 25 Desambra 2020